Aaladda Korantadu Silsilad Awood leh oo leh Gacan isbadal leh. Silsiladdan waxay leedahay gacan ku wareegidda 360 ° oo ku joogsan xaglaha horay loo sii qeexay. Guud ahaan, dadku waxay jarayaan geedo si toos ah ama toosan iyagoo ushooda u jeediya xaglo gaar ah ama leexinaya ama jiidaya qeybaha jirkooda. Nasiib darrose, shaashadu had iyo jeer way ka soo baxeysaa qabsashada ama adeegsadaha waa inuu ku shaqeeyaa meel kadis ah, kaasoo sababi kara dhaawacyo. Si loogu sameeyo dib udhacyada noocan oo kale ah, sawirka la soo bandhigay wuxuu ku habboon yahay gacan gacan qabsi si uu adeegsaduhu u hagaajiyo xagasha goynta.
Qurxinta Dhalada Dahabka-dhalaalaya "Lithuania vodka Gold. Daabacaadda 'Black Edition' waxay ka dhaxashay muuqaalkeedii gaarka ahayd farshaxanka hiddaha ee dalka Lithuania. Rhombus iyo herringbones, marka lagu daro labajibbaarayaasha yar yar, waa qaabab aad u caadi ah oo kuyaal farshaxanka dadwaynaha Lithuania. In kasta oo tixraacyada mowduucyadan qaran ay heleen qaabab casri ah - aragtiyo qarsoon oo hore ayaa loo beddelay farshaxan casri ah. Midabada dahabka iyo madow ee la saadaaliyay ayaa carrabka ku adkeeyay hannaanka sifeynta vodka u gaarka ah iyada oo loo marayo shaandhaynta dhuxusha iyo dahabka. Tani waa waxa ka dhigaya "Lodka-vodka Dahabka dahabka ah. Daabacaadda Madow ”oo aad u jilicsan oo cadcad.
Kalandarka Naqshadeyso qol, keen xilliyada - Jadwalka Ubaxku wuxuu la yimaadaa naqshad miishan oo ay kujiraan 12 ubax oo kala duwan. Noloshaada bilkasta bilkasta ubax xilliyeed. Naqshadayaasha tayada leh waxay leeyihiin awood ay wax kaga beddelaan boos oo ay u beddelaan maskaxda isticmaaleyaasheeda. Waxay bixiyaan raaxo aragtida, haysashada iyo adeegsiga. Waxay lafiican yihiin iftiin iyo shey la yaab leh, oo kobcinaya boos. Alaabtayada asalka ah waxaa loo habeeyay iyadoo la adeegsanayo fikradda Nolosha ee leh Naqshadda.
Dahabka Waxaan goob joog ka nahay dagaalka joogtada ah ee ka dhexeeya wanaagga iyo xumaanta, mugdiga iyo iftiinka, maalin iyo habeen, fowdo iyo kala dambeyn, dagaal iyo nabad, halyeey iyo baadi-gooba maalin walba. Iyada oo aan loo eegin diinteenna ama dhalasho ahaan, waxaa naloo sheegay sheekada saaxiibbadeenna joogtada ah: malaa'ig ku fadhiya garabka midig iyo jinni bidix, malaa'igta ayaa nagu dhalleeceeysa inaan wanaag sameyno oo diiwaan gelino camalkeena wanaagsan. Inaad wax xun sameyso oo aad diiwaan geliso falalkayaga xun. Malaa'igtu waa masaal u ah "superego" iyo shaydaanku wuxuu u taagan yahay "Id" iyo dagaalka joogtada ah ee ka dhexeeya damiirka iyo miyirka.
Sumadaha Propeller waa uruurinta shucuur ka yimid meelo kala duwan oo adduunka ah, oo laxiriira mawduuca safarka hawada iyo duuliyaha tijaabada ah astaan astaan ah. Astaamaha nooc kasta oo cabitaan ah ayaa lagu soo bandhigaa iyada oo la adeegsanayo sawirro badan, qoraallo u eg calaamadaha duulista hawadda iyo sawirro u adeegta cuntada sida is biirsashada. Naqshadeynta qaabab badan ayaa lagu dhameystirayaa codadyo kala duwan oo ah foil midab leh, xargaha kala duwan, qaababka iyo qufulitaanka.
Kalandarka Jadwalka xayeysiinta ee goobta xariirka, goo (http://www.goo.ne.jp) waa jadwal shaqeynaya oo xaashidan bilkasta isu beddelaya jeebka kuu oggolaanaya inaad haysato oo maamusho kaararkaaga ganacsi, qoraalada iyo risiidhada . Mawduuca waa Red String si loo muujiyo isku xirnaanta u dhexeeya goo iyo adeegsadeyaasheeda. Labada geesood ee jeebka ayaa dhab ahaan lagu hayaa tolmo casaan ah oo noqda muuqaalka naqshada. Jadwallada oo ah qaab si farxad leh loo soo bandhigo, waxay ku habboon tahay sanadka 2014.
Aaladda Korantadu Qurxinta Dhalada Kalandarka Dahabka Sumadaha Kalandarka